Sagun Khabar सरकार हामीलाई सास फेर्ने वातावरण खोई ?
सरकार हामीलाई सास फेर्ने वातावरण खोई ?
सुरेश अवस्थी बुधबार, वैशाख २९, २०७८, १९:१५:००
विगत केही महिना अघि टोल वा कुनै क्षेत्रमा देखिएको कोराना संक्रमण कसैको चासोको बिषय थिएन । तर अहिले सवत्र कोरोनाकै चर्चा छ । दिनदिनै कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । कोरोनाबाट संक्रमित हुने र मर्नेको संख्या दिनदिनै बढीरहेको छ । अहिले हरेक मान्छे संक्रमणको शिकार हुने डरले मनोवैज्ञानिक त्रासमा छन् । रेडियो, टेलिभिजन,पत्रपत्रिका लगायत सामाजिक सञ्जालमा कोरोना संक्रमणका तिता, कहालीलाग्दा र मर्मस्पशी समाग्रीहरु भेटाईरहेका छौं । गाउँ समाज छरछिमेक जताततै कोरोनाकै चर्चा छ । कोरोना संक्रमण अब समुदायमा फैलिसकेको छ ।
कोरोनाले न त धनी भन्यो, न त गरिब भन्यो न त आफ्ना चिन्यो न त पराईनै, चिन्यो त केवल मान्छे चिन्यो । कोरोनाकै कारण कतिका घरबार रित्तिएका छन्, कति साहरा विहिन भएका छन् । कतिका चुल्होमा आगो बलेको छैन् । कतिका सिउँदाहरु पुछिदै छन् त कति टुहुरा बन्दैछन् । दुई छाक खान,नाङ्गो शरीर ढाक्न, चुहिने घरको छानो फेर्न अनि आमाको फाटेको चोलो र बुवाको कमिज फेर्न विदेशिएका लाखौं नेपाली अहिले अलपत्र छन् । कसले बुझिदिन्छ होला अब तिनीहरुको पीडा ?
विदेशबाट आफ्नो देशमा जाउ भन्छ । यता नेपाल सरकार नआइजा भन्छ । सरकारमा बसेका मान्छेहरुले आफ्ना आफन्तहरुको मात्रै उपचार गर्नु छ, चिल्ला गाडीमा घुम्नु छ । केवल पीडा त गरिबलाई ।
अहिले विदेशबाट कमाएको पैसा उपचारका लागि सक्नुपरीरहेको छ । उपचारमा लुट मचिरहेको छ । तर सरकार अल्पमत र बहुमतको खेलमा मस्त छ । यता सास्ती छ त केवल नागरिकलाई छ । बर्षौंदेखिका सपना पूरा गर्न विदेश हिडेकाहरुको लाश दैनिक आईरहेपनि सरकार तिम्रो मुटु दुख्दैन, मृतकका परिवारका अश्रुधार तिमी कहिल्यै देख्दैनौ । अनि गरिबका सपना तुहिएका भएपनि तिमी सत्ताकै लुछाचुँडीमा छौं ।
अहिले देशमा बिषम परिस्थिती छ । नागरिकलाई एक सिलिण्डर अक्सिजनका लागि धौ धौ छ । अक्सिजन सिलिण्डर नपाउँदा दैनिक मर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । अस्पतालका प्रांगण, कोठा जताततै बिरामी छन् । तर सरकारलाई अहिले बहुमत र विश्वास चाहिएको छ ।
दैनिक माटोमा नंग खियाउनेहरुको चुल्हो बल्न छोडेको छ । रोगभन्दा भोकले सताउने स्थिती आईसकेको छ । तर सरकार मस्त निद्रामा छ ।
सरकारले सदैव स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु भन्छ नागरिक सके सम्म त्यो पालना गरिरहेका छन् । ठाउँ ठाउँमा निषेधाज्ञा त्यसको पालना पनि गरिरहेकै छन् । तर दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरुको हरबिजोग भएको छ ।
यता तर्फ सरकारको ध्यान कहिले जान सकेको छैन् । मजदुरी नपाएकै कारण गरिबको चुल्होमा आगो बल्न छाडेको छ । यो बिषयमा सरकार मूकदर्शक छ । उसलाई केवल विश्वासको मत चाहिएको छ । यता नागरिक श्वास फेर्ने पाईरहेका छैनन् । नागरिकलाई श्वास फेर्ने वातावरण बनाउन सरकार । बस मेरो भन्नु यत्ति हो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख २९, २०७८, १९:१५:००